यी पार्टी योजना टिप्स समारोह बाहिर तनाव लिन - समाचार नियम
यी पार्टी योजना टिप्स समारोह बाहिर तनाव लिन
तपाईं होस्टिंग घटनाहरू साँच्चै आनन्द यदि एक पार्टी को योजना धेरै मजा हुन सक्छ, तर तिनीहरूले पनि क्रमबद्ध मार्फत विवरण सबै साँच्चै तपाईंले तनावपूर्ण हुन सक्छ, को विक्रेताहरु को सबै बुक, र अतिथि सूची साथ आए.
धन्न, त्यहाँ केही सजिला पार्टी योजना सुझाव समारोह बाहिर तनाव लिन धेरै तरिकाहरू छन्. बाहिर सूची तपाईं वास्तवमा घटना योजना प्रक्रिया को हरेक मिनेट आनन्द उठाउन सक्छौं त्यसैले यी सुझावहरू केही लागि तल जाँच.
एक बच्चाहरु जन्मदिन पार्टी सरल
एक बच्चाको लागि एक जन्मदिन पार्टी योजना बनाउँदा, यो एक स्तर टाउको राख्न गाह्रो हुन सक्छ. बच्चाहरु फैंसी खाना र सजावट को तरिका द्वारा धेरै आवश्यक छैन भनेर सम्झना; तिनीहरू केवल रमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ. तिनीहरूले घटना समयमा आनन्द उठाउन सक्छौं कि गतिविधिहरु ध्यान सफल पक्ष तिर आफ्नो पहिलो कदम हो, त्यसैले देखो घर भाडा बाउन्स, खेल, चलचित्र, आदि.
साथै, तपाईं पनि साँच्चै नाश्ता केही पिज्जा र धेरै आत्म-सेवा किनभने तपाईंको अतिथि लागि पूर्ण मेनु ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छैन, केक र आइसक्रिम साथ, पर्याप्त हुनुपर्छ. घटना छोटो र सरल, निमन्त्रणा र अतिथि सूचीबाट, सजावट र पार्टी को पक्ष गर्न, र आफ्नो बच्चाको आवश्यकता राख्न, स्वभाव, र मन मा प्राथमिकताहरू.
संगठित रहन सूची कायम
पार्टी योजना प्रक्रिया राहत तनाव मा चमत्कार गर्न सक्छन् भर संगठित रहनु. तिमी सक्छौ केही सूची राख्न, एक मास्टर सूची सहित, तपाईं बडा दिन पहिले पूरा गर्न आवश्यक कुराहरू को, र तपाईं बन्द आइटम तपाईं जान रूपमा सूची मा जाँच गर्न सक्छन्.
तपाईं बिल्कुल पूरा गर्नुपर्छ भनेर मास्टर सूची सबै हुनुपर्छ. त्यसपछि तपाईं आपूर्ति को सबै को एक किनमेल सूची तपाईं प्राप्त गर्न आवश्यक हुन सक्छ, र तपाईं पनि आहार प्रतिबन्ध ट्रयाक राख्न आफ्नो अतिथि सूची हुन सक्छ, RSVPs, र सम्पर्क जानकारी.
पार्टी को लागि एक थीम को स्थापना
विवरण सबै सोचिरहेका तपाईं एक पार्टी को लागि क्रमबद्ध गर्न आवश्यक निश्चित भारी हुन सक्छ, तर तपाईं बस घटनाको विषय हुनेछ के को स्थापना द्वारा तल आफ्नो तनाव स्तर ल्याउन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं आफ्नो बच्चाको लागि पार्टी फालिएको हुनुहुन्छ कि छैन, आफ्नो बुबा लागि एक अवकाश पार्टी, वा आफ्नो श्रीमान्को पदोन्नति मनाउन एक पक्ष, विवरण सबै सँगै ल्याउन तपाईं सधैं रमाइलो र classy विषय पाउन सक्नुहुन्छ.
तपाईँले एउटा विषय सेट, तपाईं गतिविधिहरु र सजावट क्रमबद्ध को ठाँउ मा सही गिर भनेर पत्ता लगाउन गर्नुपर्छ. तपाईंले धेरै सजिलै विचार उत्पन्न गर्न सक्षम र थाहा छ तिमी जीवन आफ्नो विषय ल्याउन खरिद गर्न आवश्यक ठ्याक्कै छौँ.
सहायता माग्न नडराऊ
कुनै एक कहिल्यै तपाईंले आफैलाई द्वारा सबै पार्टी योजना छ भने. द्वारा केही सहयोगीहरूले भर्ती र तिनीहरूलाई तिर्ने आफैलाई बन्द तनाव केही लिन, यदि आवश्यक. तिनीहरूले योजना प्रक्रिया चलिरहेको बेला मदत गर्न सक्छ वा घटना नै समयमा निश्चित सबै सजिलै चल्छ बनाउन.
एक पटक तपाईं पार्टी योजना बाहिर कसरी तनाव लिन बाहिर आंकडा, तपाईं साँच्चै सम्पूर्ण प्रक्रिया आनन्द उठाउन सक्छौं, यो सबै को अन्त मा विशेष गरी घटना.
← Tipron: एक रोलिंग नेत्रगोलक रोबोट प्रोजेक्टर [भिडियो] अल्जाइमरको उपचार नजिक मस्तिष्क सुनिंनु रूपमा प्रमुख हुन देखाइएको →